Free oge | eactivo | Spanish maka kwabatara
Lee, anyị chee na abụọ nke video The akwụkwọ anyị okorobịa, Gonzalo, Bea, Mikel na David. Na nke a anyị na-ekwu okwu banyere ihe ha na-eme na ha free oge na ihe mere ha ji achọ ime na ihe ndị a.
Na ihe omume a anyị na-na inwe ajụjụ ihe bụ maka gị oge ntụrụndụ? Anyị chọrọ na-achọpụta ọdịiche yie gị omenala na nke na nke Spain. Anyị na-atụ na-amasị gị: free oge.
A video bụ maka A1 larịị, ma mmega bụ n'ihi na A2 larịị.
Echefukwala-eziga anyị gị ihe, ma ọ bụ e dere ajụjụ!
Free oge si e-arụsi ọrụ ike on Vimeo.
Tags: A2 , ide , ntị , Spanish , Ụtọ asụsụ , videocast , Okwu
3 Comments “Free oge”
Ulo ke Cuba
April 13, 2013 na- 1:27
Nnọọ uru ma na-akụzi.
October 24, 2015 na- 2:25
Onye pụrụ inyere m aka ịghọta ihe nwa agbọghọ ahụ kwuru na akụkụ mbụ? Ọ bụ na m na-anụ “crafts” na “nche TV” ma ọ bụrụ na m na-aghọtaghị ihe bụ / bụ nke abụọ ọrụ.
October 27, 2015 na- 11:12
M Delia, otu n'ime mmadụ abụọ ode-eactivo. Na na na obi ụtọ inyere, ma na m na ọ bụghị ezi ịghọta gị ajụjụ.
1. Ị nụrụ ọ dị ezigbo mma!, nwa agbọghọ ahụ na-ekwu,: “eme crafts na-ekiri TV n'ụlọ”.
2.Echere m na nke abụọ ọrụ bụ nke a “Lee vidio, -anụ aha nke ihe omume ha na-ekwu deekwa ha n'okpuru ebe”, Right? Ọ bụrụ na akwụkwọ a, m akọwa:
*Mbụ ị na-ege ntị na ụmụaka na ị ga-dee aha na-eme gị na na na nụrụ. Ọ bụghị nanị na nwa agbọghọ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe niile, umu kwa.
*Mgbe ahụ ị ga-eche: Gịnị ka ha na-apụta? na i nwere ike ịkọwa ya na Spanish? Dị ka ihe atụ: “crafts” Ọ pụtara na-eme ji achọ ọrụ na aka gị, atụ. Ọ bụrụ na ị na-adịghị aghọta ihe ọ bụla ọrụ, -achọ n'akwụkwọ ọkọwa okwu ma ọ bụ na-ajụ m.
*Mgbe ahụ ị ga-eche banyere ihe ị na-eme gị mapụtara oge, ị dị ka na-eme.
biko, ma ọ bụrụ na ọ bụghị gị ajụjụ, egbula akpọtụrụ m ọzọ.
Daalụ nke ukwuu ma ekele kachasị,